काठमाडौंको नेपाल आर्ट काउन्सिलमा कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। प्रदर्शनीमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ आर्टस्, सेन्टर फर आर्ट एण्ड डिजाइनमा कला विषयमा स्नातक गरेका १४ जना विद्यार्थीका कला राखिएका छन्।
प्रदर्शनीको उद्घाटन काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठ र नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत इभस् कारमोनाले बिहिबार संयुक्त रुपमा गरेका थिए। नेपाली कलामा नयाँ पुस्ताका कलाकारले राम्रा कलाकृति बनाउँदै गएको नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत कारमोनाले बताए।
कला र संस्कृति मानव जीवनको मेरुदण्ड भएकाले यसको विकासमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले काम गरिरहेको उपकुलपति मकाजुले बताए। स्कूल अफ आर्टस्का डिन डा. सागरराज शर्माले कलाले समाजलाई जोड्ने भएकाले प्रदर्शनीमा राखिएको कला नेपाली समाजको प्रतिबिम्बका रुपमा रहेको बताए।
पाँच दिनसम्म रहने प्रदर्शनीमा सेन्टर फर आर्ट एण्ड डिजाइनका प्रोग्राम कोअडिनेटर सुजन चित्रकारले कला क्षेत्रमा विद्यार्थीले नयाँ ढंग र सिर्जनात्मक रुपमा काम गरेको बताए।
प्रदर्शनीमा पुष्पा पराजुली, बर्सात वे कार्की, कन्चन तामाङ, निलम भुर्तेल, राजकुमार राई, राजा महर्जन, सरला मानन्धर र युनिशा श्रेष्ठले स्टूडियो आर्ट अन्तर्गत बनाएका कला राखिएको छ। त्यस्तै, एलिना मानन्धर, विशेषता धाख्वा, ज्योति श्रेष्ठ, नूरिशा सिंह, संभव महर्जन, श्रेया श्रेष्ठले ग्राफिक कम्युनिकेशन अन्तर्गत प्रोडक्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन लगायतका कला प्रदर्शनीमा राखिएको छ।
सोमबारसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा कलाकारले सांस्कृतिक, सामाजिक, लैंगिक, समानता, सपना लगायतका विषयमा कलाकृति रचना गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन ८, २०७४ ०३:०४:१८